Naghị akwụ ụgwọ maka ndị ndụmọdụ mgbasa ozi gbasara mmekọrịta | Martech Zone
Na mbara iche nke Martech ZoneM nwere ike ghara inwe na-elekọta mmadụ amplification na a oké blog dị ka Kwenye na tọghata na-akawanye (Akwa post si Jay!)… Mana enwere m ekele maka obodo anyi wuru ebe a Martech Zone.
Ihe kacha nso Nghoputa Zoomerang anyị gbakwunyere na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-emeju m nganga… unu folks bụ ọkaibe ahịa! You're na-arụsi ọrụ ike na-elekọta mmadụ media, syndicating ọdịnaya e, na-akwụ ụgwọ maka ngwá ọrụ na nkwalite… na enweghị atụ nloghachi na ego. Nanị tinye… egwu! Ọ pụtara na anyị na-ama aka na-ewetara gị ahịa ọdịnaya dị elu dị ka isi.
Otu nwere ike iche… ma DK New Media bụ elekọta mmadụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi, gịnị mere ị ga - eji nwee obi ụtọ na ọ nweghị onye ọ bụla na - agụ akwụkwọ gị kwụrụ ụgwọ maka ịjụta mmadụ mgbasa ozi? Agaba… Aga m ekwu ya… ịkwesighi. Ndị na-ahụ maka mgbasa ozi gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ha dị iri na abụọ na iru eru dị ka onye ọ bụla nwere ike iwepụta ahịrịokwu mara mma 140 yana hashtag na akara @.
Companlọ ọrụ ndị na-etinye ego na ịzụrụ ahịa na-enye aka kwesịrị ịchọpụta ndị ndụmọdụ nwere ahụmịhe na-arụ ọrụ site na usoro dị iche iche, mgbasa ozi mgbasa ozi na-enyere onye ọ bụla aka ma mee ka itinye ego na mmetụta ya dịkwuo elu. Nke ahụ na-ewe onye ndụmọdụ nwere ọtụtụ ahụmịhe karịa. Ndo ma ọ bụrụ na m kparịrị otu akụkụ nke ndị na-ege m ntị… mana belụsọ na ị matara mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nchọta, ekwentị mkpanaaka, mgbasa ozi ọdịnala, email, wdg… yana etu esi tụọ ọfụma site na… ị ka nọ n’ụlọ akwụkwọ elementrị.
Sep 21, 2011 na 2:21 PM
Ndewo Doug, abịara m ebe a na-eso njikọ sitere na post blog nke Jay. Ihe mbụ m chọpụtara bụ na ọ na-enye gị njikọ pụtara ọgaranya nke nwere isi okwu yana njikọta mmegwara gị bụ post ya na etiti gị.
Ihe nke abuo m choputara bu na odighi nke ndi nhoputa ndi ochichi bu azum. Ha bụ omume, ụzọ, na usoro omume. Iji usoro ihe eji eme ihe nke ndi mmadu nke ato abughi atumatu. Ọ bụ ụzọ isi mezuo atụmatụ.
N'otu aka ahụ, ịkwụ ụgwọ onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta abụghị atụmatụ. Pay na-akwụ ụgwọ onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji nyere gị aka ịzụlite, tinye, ma dozie usoro.
Ihe ikpeazu m n’achoputa bu na inwere onodu na nke a belụsọ ma inwere metrik nke ghaghachitere n’iru ebum n’uche gi, ị ka bụ n00b, ị chọkwara ntuzi aka ọkachamara nke onye ndụmọdụ ịre ahịa marketingntanetị ruru eru. Ihe nkwado maka ikwu ya.
Sep 21, 2011 na 2:35 PM
Enwere m ekele maka njikọ Jay! Ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka ọtụtụ ngwaọrụ ebe a, anyị na-eloda onwe anyị na njikọ ndị na-apụ apụ, yabụ ana m anwale usoro iji hụ ma ọ ga - eme ka nsonaazụ SEO anyị niile dị mma. Aga m ekerịta ozi ahụ na ọkwa n'ọdịnihu.
RE: Strategies, m na ọ bụchaghị na-ekwenyeghị na ị ma o siri ike ịkọwa n'ụzọ zuru ezu a nghoputa n'ime nghoputa aha naanị. Enwere m afọ ojuju n'ịmara na ndị folks ghọtara ebumnuche dị na ntuli aka ahụ ma ọ nwụghị na minutia. Ekwesịrị m ịgbalị ịmepụta 'nzọụkwụ' na ntuli aka iji hụ ọkwa nke ọkaibe na mmekọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ na-etinye aka na atụmatụ ha.
Nke ahụ adịghị mfe ịme… kama ịla n'iyi otu izu na verbiage kama ị na-atụfu ntuli aka iji nweta mmetụta na ahia ahụ. Achọrọ m iwepụ ntuli aka ahụ. Ọ bụrụ na nke a bụ usoro nyocha, nke na-arụ ọrụ ọnụ ọgụgụ, agara m ewere usoro dị iche.
Ana m ekwu na anaghị m ekwenye n'ihi na enwere m ụlọ ọrụ ndị wuru atụmatụ ha site na ịkọkọta ọdịnaya… ma ọ bụ na-akwụ ndị ọzọ ụgwọ. Ngwaọrụ 'nwere ike' ịbụ atụmatụ ahụ.
Sep 21, 2011 na 2:51 PM
Daalụ maka echiche nzaghachi! M ga-alaghachi na-agụ ihe posts, na obi dị m ụtọ Jay jikọrọ gị.
M ngwa ngwa na-ekweta na m nwere mgbawa m ubu mgbe á »na-ekwu okwu banyere" mmadá »media mgbasa ozi atá» strategy matá »”. Ekwenyere m na ọ bụrụ na ihe ụlọ ọrụ na-eme abụghị atụmatụ sara mbara, nke ebumnuche mepụtara, ọ bụghị atụmatụ. Kama, ọ na-arụ ọrụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ, mana ọtụtụ oge ọ na-ahapụ gị ebe ị malitere, ọ bụ naanị ogbenye na ike gwụrụ. Ọ bụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị mgbe ọ bụla onye ọ bụla na-enyere ndị isi nzukọ aka ịmata ihe atụmatụ bụ n'ezie.
Sep 21, 2011 na 2:55 PM
Ya mere, ị kwesịrị, Daniel! Enwere ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ… na-eme ka ha wụli elu tupu ha enwee usoro zuru oke. Aga m eji nlezianya mee ihe n'ọdịnihu n'ọdịnihu. Daalụ ọzọ! 🙂
Sep 21, 2011 na 3:37 PM
Amen, Doug. Amen. Agbanyeghị, echere m na ị na-agafe, mana m ghọtara na ọ bụ isi okwu gị. Ihe atụ bụ isi na ikike ịnye ngwaahịa gị n'oge ọ dị mkpa karịa.
Sep 21, 2011 na 3:42 PM
Agbalịrị m idezi okwu m ma enweghị m ike n'ihi ihe ụfọdụ. Ekwenyere m na ọ bara uru ịnweta onye nwere "igwe nke ikpo okwu, blah-blah, lingo ụlọ ọrụ, ahụmịhe mgbasa ozi" mana ọ ka mkpa ịkpọ onye mmadụ n'ọrụ dabere na nsonaazụ. Naanị n'ihi na mmadụ enweghị uche apụtaghị na ha enweghị ike ịnapụta ngwaahịa bara uru na nsonaazụ.
Onye ọ bụla na-amalite ebe.
Sep 21, 2011 na 3:51 PM
Kyle amaghị na m kwenyere. Ọ bụrụ na mmadụ enweghị ahụmịhe ahụ, ha kwesịrị iwepụta oge ịga rụọ ọrụ ebe wee nweta ya. Ahụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eduzi ọgba aghara site na ndị folks na-enweghị ahụmịhe. Ma nsonaazụ… ha kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe tupu m aga ịtụkwasị ha obi na mmefu ego m. Agaghị m atụ anya ka ihe ọ bụla belata n'aka ndị ahịa m. Anyị anaghịzị azụ ọzụzụ… ebe a enwere ọrụ na ụlọ ọrụ dabere na anyị.
Sep 21, 2011 na 4:30 PM
Echere m na m na-esi n'ọnọdụ m abịa karịa ihe ọ bụla ọzọ. Mgbe m wuru ọzụzụ maka ụlọ ọrụ, enweghị m ahụmịhe nke ụlọ ọrụ abụghị nsogbu. Ugbu a, m ga-ekwenye na n'ahịa, mmepe, na ịjụ ajụjụ ị nwere ike inwe nsogbu. Adọwa m na nke ahụ. Enweela m ụlọ ọrụ maka afọ 5 nke na-enweghị "ahụmịhe" tupu anyị amalite ya.
M na-echeghị na ị chọrọ ịga “na-arụ ọrụ ebe” tupu gị na-ego dị ka ọkachamara ma ọ bụ onye nwere ike ịnapụta uru. Ọ bụrụ na akwụgoro m iji kpalie otu ndị isi ma ọ bụ nyere aka ịkpụzi atụmatụ maka nnukwu ọrụ anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na m na-enyefe uru… ọ gaghị mkpa.
Enwere m ndepụta niile nke ndị nwere ahụmahụ bụ ndị dara. Amaghị m ma ọ bụrụ na ahụmịhe bụ okwu… o kwesịghị ịbụ ike gị ịnapụta ihe ị na-ere? Oge?
Ma kwere m, M na-abịa si ele ihe anya nke na-ere ihe na-ada ada… Echere m na anyị niile nwere.
Sep 21, 2011 na 4:40 PM
Echeghị m na ị na-ejikọ m na akụkụ 'ahụmịhe'. You na-adịghị na-ewu ọzụzụ maka ụlọ ọrụ na-esi n'ụzọ dị irè na-ewu a ụlọ ọrụ… ị na-ewu ọzụzụ na n'ụzọ dị irè tinye n'ọrụ na-elekọta mmadụ media, nri? Gụrụ akwụkwọ na ịzụlite ọzụzụ, nri?
Ya mere… nke ahụ bụ ihe ị nwere ahụmahụ… na ọzụzụ gị bụ ihe ịga nke ọma. M ga-ego gị n'ihi na… ma m na-agaghị iku gị inyere m aka azụmahịa na-na a ọhụrụ ike omume mgbe ị na-enweghị ahụmahụ n'ebe, nri?
Banyere ọdịda, mụ na ndị mmadụ agaghị arụkọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha kwuo na ha emeghị nke ọma. Echere m na ihe m kwuru bụ na ha "na-agbanwe agbanwe" na ikike ha ị nweta nsonaazụ. Nke ahụ ga-eme ka ọdịda daa. Ma, m na-agaghị iku onye ndụmọdụ na-ekwu, “ka ụbọchị, M na-arụ ọrụ 8 ahịa na-emeghị na-arụpụta maka 4 nke ha”. 🙂
Sep 21, 2011 na 8:10 PM
Ejiri Media niile (ọ dịghị ihe ezubere Zuck). Callkpọ ndị a sị na ha bụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi gbasara mmekọrịta mmadụ na eze “dime iri na abuo” anaghị eme ya ikpe ziri ezi. M nọnyeere gị otu narị percent wee nweta gị azụ bro.
Sep 26, 2011 na 5:49 PM
"Ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi bụ dime iri na abụọ na iru eru dị ka onye ọ bụla nke nwere ike iwe okwu ahịrịokwu 140 ọnụ na hashtag na akara @."
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ihere nke na-adabaghị na mkpụrụ edemede 140.
N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye kwere ekwe na ọchịchị 10,000 hour, ọ ga-esiri onye ọ bụla ike ịbụ ọkachamara na mgbasa ozi mmekọrịta; ọ dịbeghị anya ezuola.
Mgbe ọ nọ na ogbako Exact Target, Jay Baer kwuru na “soshal midia bụ ọrụ ugbu a, mana n’oge na-adịghị anya ọ ga-abụ aka ọrụ. Dị ka ịpị ma ọ bụ mepụta mbipụta. Anyị na-enwebu ndị mmadụ maka nke ahụ, mgbe ahụ anyị chọpụtara na ọ ka arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere nka. ” (Ihe ụfọdụ akọwapụtara ya.) Agbanyeghị, echere m na ọ ga-abụ onye ziri ezi.
Sep 26, 2011 na 5:57 PM
Nke ahụ bụ Jay Baer bụ onye ezi omume!